Lapho kuqala ngamalanga wamaholideyi wehlobo emikhayeni eminingi isiRashiya yashubisa kwi inhlangano uzijabulisa izingane. Yiqiniso, njengoba abadala, abangakwazi ukukhokhela ukuthatha iholidi ngezinyanga zasehlobo bathambekele beveza okungajwayeleki ukuchitha sikhathi ngenjabulo futhi inzuzo. Ngokuvamile, izakhamuzi zethu nabo ujike ukuhamba ejensi ukuthola uhambo engabizi Turkey futhi amazwe eMpumalanga Asia. Kodwa endaweni ethandwa ngokulinganayo Europe kanye, ukuvakashela ehlobo e-UK, eFrance nase-Italy angathanda amaRashiya amaningi kakhulu. Ngeshwa, kule minyaka yamuva, amacala okukhwabanisa yizinkampani abonakele ukuthi kakhulu kubukela phansi ukuthembeka lezihambi ezingaba khona. Nokho, emakethe travel emhlabeni, kukhona abamele Uyakufanelekela, owakhonza iminyaka eminingi ukufakazela bakithi ithembekile. A isikhundla okuholela kulolu hlu ukuvakasha opharetha BSI Group, ukusebenza ikakhulu isiqondiso European. Lena inkampani enkulu ebambe, futhi abazinikele sihloko namuhla yethu.
incazelo emfushane inkampani yokulungisela abahambayo
Tour opharetha "UBS Hay Iqembu" usebenza emakethe kwezokuvakasha engaba-ngamashumi amathathu - kusukela ngo-1990. Phakathi nalesi sikhathi, inkampani wakwazi ukubonisa ngokwaso njengoba umlingani onokwethenjelwa futhi wemfanelo, okuyinto eba iqoqo izinkomba bese inikeza izihambi indlela ngamunye. Yilokho edonsela bakithi abayibekile dream mayelana iholidi enkulu imali ezinengqondo.
Lokhu eliyifa Sekuyisikhathi eside njengengxenye engcono kakhulu tour operator eYurophu, ikakhulukazi ke ayinakuqhathaniswa enhlanganweni kuyiwe UK. Ngenxa yokuthi lokhu sekwandile waqala umsebenzi tour operator BSI Group, futhi manje amahhovisi ayo e-London ne-Edinburgh. Lokhu kuvumela abasebenzi ebambe ngokwakho ukuhlangana nezivakashi ezivela eRussia nase ngokushesha ukuxazulula zonke izinkinga. Ngendlela efanayo inkampani BSI Iqembu ihlelwe emsebenzini abahambi abaya France. Esikhathini izinhlelo eliseduze ukuzibamba kuvulwa amahhovisi ayo kuwo wonke amazwe aseYurophu, okuzokwenza kakhulu lula inhlangano izinkambo nokuqinisekisa ukuphepha yizivakashi ezibuka amazwe, azohlala.
wokuqala ehhovisi tour operator wayo BSI Group ivule e Moscow, kodwa manje emahhovisi enkampani zingatholakala kweminye imizi Russian:
Singasho ukuthi ngosizo opharetha cishe kunoma iyiphi baseRussia uzoya e-Europe nase ukuchitha kulolu hambo zonke izimali zabo.
Ikakhulukazi kokukhuluma kuwufanele travel ukonga nge opharetha ukuvakasha BSI Group. Lokhu kungenxa yokuthi inani elikhulu abalingani angaphandle, ithuba ukuvula emahhovisi abo omele phesheya, kanye ngokubambisana kanye yezinkampani ezinkulu e-Europe. Ngokwesibonelo, inkampani "Aeroflot", ngokwemibiko inkontileka okukhethekile uqinisekisa BSI Group Holding amabhlogo wonke lezihlalo ukuthi aqede eziseceleni kanye nobunzima ngokuthengwa kwamathikithi ngamaholide, lapho ukugeleza izivakashi luyanda kakhulu.
Phakathi ukhona, inkampani ithole inqwaba imiklomelo Russian angaphandle. Ngakho-ke, uye wenza okungaphezu nanhlanu travel ejensi ahlukahlukene abafisa ukunikeza amakhasimende ayo nge iholide ezithakazelisayo futhi engabizi.
Oxhumana lokuqala inkampani BSI Iqembu imele uma unentshisekelo evakashele eYurophu. Lapha, inkampani ephethe ayinakuqhathaniswa, ihlela iholide lakho ephelele kula mazwe alandelayo:
Ngokulinganayo ezimisiwe elala inkampani futhi tour opharetha eNyakatho Yurophu. Wena nakanjani bayothokoza ngokubuyiselwa zivakashele eNorway noma Sweden. Mayelana nomkhosi wokuhlanganisa isithakazelo baseRussia kuya Finnish tour operator BSI Iqembu isungule futhi banikezwe isiqondiso.
Uma ungeyena uzimisele ukuchitha wonke uhambo lwakho sendleleni eYurophu futhi inikele konke ukuvakasha indawo, inkampani ahlele wena iholide elikhulu e Greece, eDominican Republic noma-United Arab Emirates. Futhi ungakwazi ngcono impilo yakho ku-Israyeli neChina, lapho ungase futhi ukuthumela inkampani "UBS Hay Group."
Izinhlobo travel ne ebambe BSI Group
Oholela tour operator eYurophu cishe engamashumi amathathu ukhona uye wakwazi balukhulume cishe zonke izinhlobo ezokuvakasha, ngakho izisebenzi bayajabula ukugcwalisa efunwa yakho ngokuphelele. main izivakashi izindawo BSI Qembu kunalezi zinhlobo ezilandelayo: ikhambo:
izinhlelo zemfundo, ngokuhlanganiswa ukuphumula;
ibhizinisi ezokuvakasha nge BSI Group;
yokuvuma izakhamuzi zakwamanye amazwe ensimini ka-Russia.
Ngenxa efaneleyo eliphezulu abasebenzi yenkampani kanye indlela yabo ezintsha ekuxazululeni izinkinga, noma iyiphi uhambo siphenduke into ngempela ekhethekile.
BSI Group Holding uhlela izinhlobo ezahlukene izinkambo yonke iYurophu. Le nkampani inikeza ezihlukahlukene imisebenzi yokuzilibazisa, zazo uqiniseka ukukhetha okuthile ukunambitheka yakho kanye nesabelomali. Ngokwesibonelo, imizuliswano eBelgium nge BSI Iqembu emelelwa embodiments engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Abanye abantu bakhetha abe ukuhlala ngempelasonto, okubandakanya izinsuku ezintathu futhi ezine nobusuku Brussels enhle. Izivakashi ungakwazi enyuka emigwaqweni yayo lasendulo, amakota ephakathi izindawo ezintsha ngokuphelele idaliwe kusuka ingilazi nokhonkolo. Phakathi nalesi sikhathi, abahambi uyobheka zonke izinto edolobheni bese uzama okumnandi ushokoledi kophudingi ngaso amathilomu wendawo. Izindleko umcimbi travel ematasa kangaka hhayi ruble ezingaphezu kuka-abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu eyodwa nge Ukuhamba kusuka eMoscow.
Futhi uma uthanda iholidi ngaphezulu asebenzayo, ungakhetha uhambo emzileni Amsterdam - Bruges - Brussels - Luxembourg. Yiqiniso, izobiza kakhulu ezibizayo - ruble yikhulu nanhlanu ayizinkulungwane. Kodwa kulabo dream of ngesonto elilodwa ukuvakashela emadolobheni amaningi amahle, le ndlela ngeke ofanele kakhulu.
ezihlukahlukene okunjalo tour group tour inkampani ngokuphelele kuzo zonke izindawo.
BSI Iqembu okukhethekile izinkambo yangasese, ngiyabonga kubo yisiphi isihambi bazokwazi ukudlula bebodwa kusuka cishe kunoma yiliphi izwe emhlabeni. Ngokuvamile, indlela umuntu senziwa ngesisekelo iqembu, kodwa inqubo wanezela kuso ezihlukahlukene hambo nge Abaqondisi abakhuluma isiRashiya, amahhotela, efanelekayo isabelomali, kanye elula ku-time izindiza kanye ujantshi yokuwela.
Ngaphezu kwalokho, abahambi ungaqiniseka ngokuthi esigabeni ngasinye uhambo zona, babeyoqabuleka ephephile ngaphansi kokulawula aphethe iqembu. Lokhu ngokuvamile ehilelekile kuyisici kokunquma ekukhetheni opharetha ukuvakasha ozimisele uhlele uhambo siqu.
Ngokwesibonelo, uma unentshisekelo izinkambo ase-Austria, BSI Iqembu ilungele ukudala ngawe umzila ezithakazelisayo uhlelo ocebile, kuhlanganise iholidi ngaleso spa ezishisayo, indawo uhambo Vienna, kanye nokuya amakhonsathi nomculo imikhosi, okuvame ukuthatha indawo kuleli zwe. Uma wayefisa, ungase futhi wengeze lokhu ukuzilibazisa umzila ngesikhathi ski resort noma ephilayo edolobhaneni elincane alpine sizungezwe ezimfundeni, amachibi nezintaba ezingaphansi kolwandle.
Izindleko izigaba ngazinye kunzima ukumemezela, esimweni ngasinye, intengo zizohluka. Ngakho-ke, ngokuvamile abasebenzi BSI Iqembu ekuqaleni abanentshisekelo ekuvakasheni isabelomali bese kuphela ukuqala iklayenti kungenzeka ukuba ukhethe indlela efanele.
A evakashele eYurophu ukufunda olunye ulimi, ngokuhlanganiswa lonke kolwandle, athandwa kakhulu isizini ihlobo. Ngokuvamile, lezi izinkambo abazali ukuthenga izingane zabo ukuze kazichithi iholidi ize futhi wakwazi ukuthola ulwazi olusha futhi nakho.
Ngokuvamile kule iholide amakhasimende akhethe Cyprus, Cuba bese kuba iGrisi. Eminyakeni yamuva babe izinkambo ethandwa zemfundo eChina, Turkey ne-Argentina. Kusukela kokuthatha uhambo olunjalo zihlale umxhwele acacile kakhulu futhi ulwazi aluthola kuzosiza esikhathini esizayo ukuze samukele lwezifundo ngokushesha.
EYurophu lehla ngokushesha inani kukhona eziningi athuthukile izivakashi zokungcebeleka, lapho ungakwazi ngcono impilo yakho futhi uthole ophethe vivacity unyaka wonke. Muva inkampani BSI Iqembu banika amaklayenti ayo izinkambo e-Eastern Hungary. Kanye indawo zaleli zwe elihle, izivakashi bazokwazi ukuchitha isikhathi at Lake Heviz, lapho kukhona omunye zokungcebeleka edume kunazo zonke eHungary. Nakhu kufika abantu abanezifo of the system zemisipha, ithambo, kwenzwa nokungenwa iziyaluyalu umzimba. Ngeviki eLake amaholide kuyoba ibanga nezinqubo yokwelapha ziyoba emzimbeni ukuphulukiswa nethonya elinamandla.
Inkampani BSI Group ukwenza inhlangano sokwelashwa uphethwe ngo okungcono European nezikhungo zezokwelapha. ungakhetha uhambo Switzerland, Austria noma Czech Republic uma uthanda. Ezweni ngalinye, imihlangano ilungele ukuhlela esele ngawe, kuhlangene ukwelashwa.
Njengoba yaziwa, ukuhlela uhambo ibhizinisi nzima kakhulu kunokuba iholidi ejwayelekile. Phela, kumele umsebenzi esihlelwe futhi kusobala, futhi isikhathi ibalwa kahle. Kodwa uhambo opharetha BSI Iqembu Yaziwa ikhono layo ukuhlela uhambo zebhizinisi kuphi emhlabeni. Ephethe uthembisa amathikithi, namahhotela futhi sokuqasha namahholo inkomfa. Agency abasebenzi futhi sinikeze ezokuthutha izivakashi esehlela ukuba kube nomhlangano esikhumulweni sezindiza ezingeni eliphezulu kakhulu. Ukuze ngezebhizinisi ingavuli ku uchungechunge izingxoxo, inkampani BSI Iqembu ozoyenza mayelana ezokungcebeleka amaklayenti abo. Kuyoba ukhetha nabo ebhizinisini nemibukiso ezithakazelisayo kakhulu, yezobuciko futhi iyiphi enye ukuhlela umcimbi ukuzijabulisa kanye namakhasimende ibamba.
abasebenzi BSI Iqembu bayakwazi ukuvula uhambo eziwubala yaya okuthile sikhumbuleke futhi ezithakazelisayo.
Inkampani uyakwazi ukuhlela nokungcebeleka izakhamuzi zakwamanye amazwe ukufika e-Russia ohambweni iholidi noma ibhizinisi. ungakwazi ukubamba imihlangano yokubonisana izingqungquthela iqhaza abahumushi Nge BSI Group. Inkampani enakekela zonke ezicashile umcimbi kanye nokubekwa abahlanganyeli angaphandle. Ngokuvamile BSI Iqembu enquma kanye nezindaba visa umyalelo ezahlukene.
BSI Group, umqhubi ukuvakasha: Izibuyekezo
Uma, ukuze unqume ukuthi ukwelashwa kule nkampani, udinga impendulo ku-inthanethi bese uzothola kubo izinto eziningi ezanele. Cishe wonke amakhasimende ubambe ukubonga yashiwo ku-BSI Iqembu i umzila engavamile futhi ezithakazelisayo, iziqondiso abawaziyo futhi bathande umsebenzi wabo, kanye amahhotela omangalisayo, akhethiwe ikhumbula izici ngamunye zezivakashi.
Ekhuluma ngalezi amazwana, singasho ukuthi kokuhamba e-Europe, ongeke uthole umhleli kunokwethenjelwa futhi professional ongesiye umqhubi ukuvakasha BSI Group.
Thenga Online SammyDress: izibuyekezo zamakhasimende, abakhiqizi umkhiqizo uhla, ikakhulukazi yezitolo
Amasevisi lonakekela namahhovisi izinkampani wokuhlanza - ikhambi ephelele!
Warsaw, zezitolo: uhlu lwamakheli kanye nokubuyekeza
Studios Network manicure Leny Leninoy. studio manicure Leny Leninoy: ukubukwa, imicabango yabantu, Franchise
Lapho ungabeka inqubo ezindala imali: ukuthenga zikagesi kanye nemishini computer ngoba izingxenye ezisele
Nikeza lowo muntu angajwayelekile
Amatshe endlu Pisces njengophawu zezinkanyezi
Bangaki square metres umuntu ngamunye kuyadingeka ngokomthetho?
Abelskaya Irina: Biography ngezithombe
Indlela engcono ukupheka inyama nemifino epanini
Yokuziphatha njengoba Isayensi: Definition, isihloko mayelana nokuziphatha, kuncike futhi imisebenzi. Isihloko yokuziphatha ...
Yaroslav Degtyarev: ukuthi ngamehlo "Amazwi" izingane iqhaza sika
Indlela yokwenza amakhadibhodi ifenisha for onodoli: amaphethini, imiyalelo
Kartagener syndrome ezinganeni: ukuxilongwa, isithombe, ukwelashwa
Lethal izikhali - kuyini? Izinhlobo ezingapheli zezikhali
Umlingisi Charlz Louton: Filmography